घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू कापा बालिका स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण कहानी को एक लक्ष्य कोपर प्रस्तुत गर्दछ सबै भन्दा राम्रो उपनाम "बर्ड मास्टर"। हाम्रो केपा बालबालिका स्टोरी प्लस जीवनी तथ्यहरूले तपाईंको बचपनको समयदेखि उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो शट रोक्न क्षमताहरू बारे जान्दछन्। तथापि, केवल केहि केहि केपाको बायो मा विचार छ जो धेरै रोचक छ। अब अगाडी अचम्म बिना, सुरु गरौं।
Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक जीवन र बर्ड इफेयर
बन्द गर्न, केपा एरिजोलागागागा रिव्युल्टाले3अक्टोबर 1994 मा स्पेनको बास्क समुद्री समुह शहर ओडेडर्रोमा आफ्ना आमाबाबुलाई जन्मियो।
केपा एक शुरुआती उमेरको एक स्पष्ट प्रतिभा थियो। उनले भने, हुनत, शिकार को दोस्रो बचपन जुनून संग र फुटबल ब्यालेन्स फुटबल र आफ्नो पक्षी लाई पछि जो आफ्नो पिता संग गरे। जब केपा एक बच्चा थिए, आफ्नो पिता संग, गोल्डफिन (एक उत्तरी अमेरिकी पक्षी जुन माइग्रेट गर्न मनपर्छ) को शिकार र त्यसपछि उनीहरूलाई गाउन सिकाउँथे।
"उहाँले धेरै जवान हुनुभएकोले उनले आफ्नो बुबालाई पिराखाहरू सफा गर्न र झाडीमा सुनफाइनल उठाउँछन्।"
उनको आमाले भन्नुभयो।
कापा बालबालिकाको हत्या,स्पेनी बर्ड प्रतियोगिता
केपाको लागि, मायालु पक्षीहरूको अभिनयलाई व्यावसायिक मोडमा लैजानु पर्यो जसले उहाँलाई फुटबल खेल्न, स्कूल जान र तिनको विचित्र पक्षी शौकको लागि वास्तविक प्रतिभाको बीचमा बहुसंख्यक देख्यो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?... Kepa को पक्षी, नाम ओकर, रकी र राकिकोनन, न्यायाधीशहरूको केही प्यानलले विशेष गरी उनीहरूका चराहरू विशेष गरी 2008 र 2010 मा क्षेत्रीय पक्षी गायन प्रतियोगिताहरू जिते। ओकर सबैभन्दा सुन्दर थियो। ती वर्षहरूको लागि (2008 र 2009), केपालाई नाम दिइएको थियो भिजाया को गीतबर्ड चैंपियन। यो ओकर थियो, तलको चित्रण जसले हिट गीतलाई दिएको छ जसले आफ्नो दुई शीर्षकहरू उद्धार गर्यो।
लेखन को समयमा, दुवै ओकर, रकी र राकिकोनन हो अझै प्रतिस्पर्धामा प्रयोग भइरहेको छ।
Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
हामी अहिले आफ्नो क्यारियरमा फर्किनेछौं जुन बास्क देशको सानो शहर ओडर्रोरोमा सुरु भयो। फुटबलको लागि उनको जुनून6उमेर मा देखा पर्यो, आफ्नो स्थानीय युवा टोली को रोस्टर दाखिला दिए जसले उनलाई आफ्नो प्रतिभा को प्रदर्शन गर्न को लागि मंच दिए।
9 सम्म, उनले पर्याप्त प्रभाव पारेको थियो जुन एथलेटिक बिलबोबाको जवान पक्षले उनको हस्ताक्षर प्राप्त गर्यो। यो समयमा उहाँ गोल्डफिनस्की पक्षीहरूको प्रशिक्षण सुरु गर्नुभयो।
एथलेटिक बिलबाओ रेन्क्सको माध्यमबाट केपाको प्रगति निकै छिटो थियो। त्यसपछि त्यसोभए, कहिलेकाहीँ गोलाबेप्पा र घुमाउने खेलमा स्विच गरियो। केपा एक समयमा उनले एथलेटिको बिलबोबाको लागि 14 पक्षमा खेल्ने मैदानमा गोल गरेका थिए।
Aउनीहरूले विकसित गरेका छन्, किपाका रिफ्लेक्स र गतिले उनको प्रशिक्षकलाई रूचाउन थाले जुन एथलेटिक क्लबमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्न फर्केपछि दुई क्लब (पन्न्फरेराडोना र भिल्लडोकोड) लाई पठाइयो।
उनको विकासको थप प्रमाण देखाउनका लागि अर्जेन्टिनाले £ 1 9एनएमएमक्सएक्स रिलीज क्लजलाई 1975 मा एक्ससेन्टिङ्गमा चेल्सी द्वारा भुक्तानी गरेपछि एक्सएनएक्सएक्सले आफ्नो केपालाई विश्वमा सबैभन्दा महान् गोल्डेपरको रूपमा लिभरपुलको पछि लागेका थिए। एलिसन बेकर जुन उही 2018 गर्मीको ट्रान्सफर सन्झ्यालमा खरिद गरिएको थियो।
लेखनको समयमा, लन्डनका केपाको यात्राले उनीहरूको चराहरू लिने देखेनन्। आफ्नो पक्षी गाई बनाउनको सट्टा, चेल्सीका प्रशंसकहरू अब उनको नाम गाईन्छन्।
Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक सफल स्पेनी फुटबलर पछि, त्यहाँ उनको प्रेमी, केपा संग तल चित्रित एन्ड्रिया पेरिस व्यक्ति मा देखिएका ग्लैमरस वाग वा प्रेमिका हो।
लेखन को समयमा, धेरै सानो श्यामला सौंदर्य को बारे मा जानिन्छ। स्रोतले इटालीलाई सोशल मिडियामा लिम्बुटबाट टाढा टाढा राखेको छ जसले व्यक्तिगत मोडमा आफ्नो व्यक्तिगत खाता राखेको छ। यद्यपि, केपा नियमित रूपमा आफ्नो Instagram खातामा डु को तस्वीरहरू पोस्ट गर्दछ। तल देखाइएका तस्वीरहरू मेक्सिकोमा उनीहरूको छुट्ट्याइएको एक हो।
Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Zidane विफलता
तपाईंलाई थाँहा थियो?… केपा रियल म्याड्रिडमा सामेल हुन नजिक आइपुग्यो। धेरैको अनुसार Zidane आलोचकहरू, यो उनको नकारात्मकता थियो जुन सम्झौता गरेन।
यो स्पेनिश सबैभन्दा लोकप्रिय समाचार पत्र अनुसार हो मार्का, Zidane केपाका अधिग्रहणको बारेमा सकारात्मक थिएन भने उनीहरूले केपाले फुटको चोट गर्थे जुन डरले ट्रान्सफरलाई असर पार्छ। म्याड्रिड क्लबका निर्देशकहरूले उनको कदमको लागि सहमत भए पछि, Zidane अझै 2018 जनवरी ट्राभलस सञ्झ्यालमा एथलेटिक बिलबाओ गोलकीपरको लागि चालको भनाइमा अझै पनि अस्वीकार गर्यो। यस अनुसार Zidane...
"अहिले हामी गोलाकारको आवश्यकता छैन। पछि जूनमा यदि परिवर्तन भएमा, यदि हामी बस्छौँ र कुरा गर्छौं, त्यसो भए त्यहाँ केही स्थानहरूमा किन्न आवश्यक हुनेछ "
उनले एक प्रेस सम्मेलनमा भने। सुनेपछि Zidaneशब्दहरू, केपा जसले रियल म्याड्रिडसँग व्यक्तिगत टोलीमा सहमति गरेका थिए उनीहरूको दिमाग परिवर्तन गर्न निर्णय गरे। यो एक त्रुटि थियो जो प्रेतवाधित Zidane उसले स्पैनिश विशालबाट बाहिर निस्कने निर्णय गरे।
केपाका लागि स्थानान्तरण लगभग £ 18 मिलियन थियो जब म्याड्रिड अस्वीकार भयो। पूर्व रियल म्याड्रिड प्रबन्धकले भने भने पहिले अस्वीकार गर्नुअघि केपीले एक जनालाई पनि पास गरेन।
Kepa Arrizabalaga बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रिलीज क्लज
अब हामी तपाईंलाई भन्छौं कि किन चेल्सी केपाका लागि यति धेरै पैसा तिर्नु भयो।
Zidane Kepa भन्न को लागी कि यदि उसले तिनीहरूलाई लागि साइन इन गर्न चाहानुहुन्छ, उसले तत्काल शल्यक्रिया गर्न आवश्यक छ जसले रिकभरीको लागि आफ्नो मेडिकल टाइमलाइनको विरुद्ध जाँदैछ। यसले केपालाई आफ्नो मौका उठाउन छोड्यो। एकै समयमा एथलेटिक, हवामा अनिश्चितता देख्यो, फिर्ता गए र उनलाई एक सुधारिएको सम्झौता प्रस्ताव गरे जसले उनलाई भारी मात्रामा जारी खण्डको नेतृत्व गर्यो जुन चेल्सी आज म्याद्रिडको दोषी ठहरिन्छ।
एथलेटिकसँग केपाको सम्झौता नवीनीकरणले नयाँ रिलीज क्लज देखायो जुन £ 18m देखि £ 71m सम्म उठ्यो। चेल्सा मोनिज तिर्न गए।
Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर व्यक्तित्व
फुटपाथ पण्डितहरूले केपालाई स्पेनिस पौराणिक गोलकर्ता, इकर क्यासिलाससँग तुलना गरेका छन्। यद्यपि, केपा पूर्व म्याद्रिड गोलाकार भन्दा सानो थलो छ। केपा6फुटमा उभिएको छ र तिनी4इन्च भन्दा कम छ थिब्ता कोर्टटोस.
मरिजिओ सरीले किपामा हस्ताक्षर गरे किनभने उनी तिनलाई हेर्छन् जसले आफ्नो खुट्टामा बलसँग सहज छ जो आफ्नो शैलीमा फिट बस्छन्। सम्झनुहोस्, केपाले आफ्नो 14 दिन भित्र मध्य-क्षेत्रको स्थिति खेल्न थालेको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Kepa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.